Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Zvita 28, 2017
Nyakubvisa VaMugabe pachigaro nechisimba, VaConstantino Guvheya Chiwenga, pamwe naVaKembo Mohadi, vanotoreswa mhiko yekuva vatevedzeri vemutungamiri wenyika pahurongwa hwapindwa naVaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo.
Mapato anopikisa anoti haana kushamiswa nekutoreswa mhiko semutevedzeri wemutungamiri wenyika kwaitwa VaChiwenga sezvo kubvisa kwavakaita VaMugabe pachigaro kwaive kwakanangana nekuda masimba ekutonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzozeya kudzikwa kwemutemo unobata zvinoitirwa mutungamiri wenyika anenge aenda pamudyandigere, izvo zvaitwa mushure memazuva makumi matatu nemanomwe VaMugabe vasiyiswa basa nemauto achitungamirwa naVaChiwenga.
Bazi revashandi vehurumende roiswa pasi pehofisi yemutungamiri wenyika.
Muchirongwa che Women’s Roundtable na 8pm, tiri kutarisa zvakasangana nevanhukadzi mugore ra 2017..